ဗီဒီယိုဖိုင်တစ်ခုကြောင့် ပရိတ်သတ်တွေရဲ့ဝေဖန်မှုတွေမြင့်တတ်နေပြန်တဲ့ ဖြူဖြူထွေး – Maythadin
ဗီဒီယိုဖိုင်တစ်ခုကြောင့် ပရိတ်သတ်တွေရဲ့ဝေဖန်မှုတွေမြင့်တတ်နေပြန်တဲ့ ဖြူဖြူထွေး
May Thadin | October 23, 2021 | Cele News | No Comments
ဖြူဖြူထွေးကတော့ကိုယ်ပိုင်စိတ် ကူးလေးတွေနဲ့ကြော်ငြာတွေကို ရိုက်ကူးပြီးပရိသတ်အချစ်တွေကို ရယူထားနိုင်သူလေးပဲ ဖြစ်ပါတယ်. . ဖြူဖြူထွေးကတော့ မိသားစုလိုက် ရိုးသားဖြူစင်ခြင်းတွေနဲ့အတူ အလှူအတန်းတေ့လည်း ရက်ရောတယ်ဆိုပြီးတော့ ပရိသတ်များကလည်း ချစ်ပေးခဲ့ကြပြန်ပါတယ်။ နိုင်ငံရေးမတည်ငြိမ်နေတဲ့ အချိန်ကာလအတွင်းမှာတော့ ဖြူဖြူထွေးတစ်ယောက် တိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်နေခဲ့ပြန်ပါတယ်. ..
အနုပညာရှင်တော်တော်များများလည်း တရားသောဘက်နှင့် မတရားသောဘက်ကို လူသားချင်းသိတတ်စွာဖြင့် သိတတ်ခဲ့ကြပြီး ပြည်သူလူထုနဲ့အတူ ရပ်တည်ခဲ့ကြပေမဲ့ အဲထဲမှာ ဖြူဖြူထွေးကတော့တိတ်ဆိတ်နေခဲ့ပြန်ပါတယ်။
မကြာမှီရက်တစ်ရက်မှာတော့ ဖြူဖြူထွေးတစ်ယောက် ပြည်သူတွေ အတွက် အအေးဗူးတွေ ထွက်ပြီးကမ်းလှမ်းခဲ့ပေမဲ့ ပရိသတ်တွေကတော့ သူမအပေါ်မှာ ချစ်တဲ့အချစ်တွေအစား ဝေဖန်မှုတွေသာ တိုးနေခဲ့ပြန်ပါတယ်။
ဝေဖန်မှုတွေ ခံနေရင်းနဲ့ပဲ ရန်ကုန်မှာဆက်လက်နေထိုင်ရင်း မကြာခင်မှာတော့ သူမတို့နေထိုင်တဲ့ နယ်ကိုပဲ ပြန်တော့မယ်ဆိုပြီး ပြန်သွားပြီးနောက်ပိုင်းမှာတော့ အားလုံးကို လွမ်းနေတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းတွေကလည်း တင်လာခဲ့ပြီးနောက် အလှူအတန်းဆို ရက်ရောတတ်တဲ့ ဖြူဖြူထွေးတစ်ယောက်ကတော့ သူမ တတ်နိုင်သလောက် လှူဒါန်းမှုလေးတွေတော့ အမြဲပြုလုပ်လျက်ရှိပါတယ်။
ဒီနေ့လေးမှာတော့ ဖြူဖြူထွေးက ” ဒီနှစ် သတင်းကျွတ်လေးကတော့ မိသားစုရှိရာမွေးရပ်မြေလေး ဆီသို့အပြန် လမ်းကအမျိုးများနဲ့တွေ့ စဉ်က ဘာလေးလှူရလှူရ ” ဆိုပြီး ဗီဒီယိုလေး တင်ပေးလာတာ ဖြစ်ပါတယ်နော်..
သူမ တင်လာတဲ့ဗီဒီယိုအောက်မှာတော့ အရင်လိုပဲ လှူတဲ့နေရာမှာ ကင်မရာတွေကိုအိမ်မှာပဲ ထားခဲ့သူဆိုတဲ့သူနဲ့ ဝေဖန်မှုတွေ မြှင့်တက်နေခဲ့ပါတယ်နော်… ပရိသတ်ကြီးလည်း ဖြူဖြူထွေးရဲ့အလှူလေးကို သာဓုခေါ်ပေးကြပါအုံးနော်…
ျဖဴျဖဴေထြးကေတာ့ကိုယ္ပိုင္စိတ္ ကူးေလးေတြနဲ႕ေၾကာ္ျငာေတြကို ရိုက္ကူးၿပီးပရိသတ္အခ်စ္ေတြကို ရယူထားနိုင္သူေလးပဲ ျဖစ္ပါတယ္. . ျဖဴျဖဴေထြးကေတာ့ မိသားစုလိုက္ ရိုးသားျဖဴစင္ျခင္းေတြနဲ႕အတူ အလႉအတန္းေတ့လည္း ရက္ေရာတယ္ဆိုၿပီးေတာ့ ပရိသတ္မ်ားကလည္း ခ်စ္ေပးခဲ့ၾကျပန္ပါတယ္။ နိုင္ငံေရးမတည္ၿငိမ္ေနတဲ့ အခ်ိန္ကာလအတြင္းမွာေတာ့ ျဖဴျဖဴေထြးတစ္ေယာက္ တိတ္ဆိတ္ၿငိမ္သက္ေနခဲ့ျပန္ပါတယ္. ..
အႏုပညာရွင္ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားလည္း တရားေသာဘက္ႏွင့္ မတရားေသာဘက္ကို လူသားခ်င္းသိတတ္စြာျဖင့္ သိတတ္ခဲ့ၾကၿပီး ျပည္သူလူထုနဲ႕အတူ ရပ္တည္ခဲ့ၾကေပမဲ့ အဲထဲမွာ ျဖဴျဖဴေထြးကေတာ့တိတ္ဆိတ္ေနခဲ့ျပန္ပါတယ္။
မၾကာမွီရက္တစ္ရက္မွာေတာ့ ျဖဴျဖဴေထြးတစ္ေယာက္ ျပည္သူေတြ အတြက္ အေအးဗူးေတြ ထြက္ၿပီးကမ္းလွမ္းခဲ့ေပမဲ့ ပရိသတ္ေတြကေတာ့ သူမအေပၚမွာ ခ်စ္တဲ့အခ်စ္ေတြအစား ေဝဖန္မႈေတြသာ တိုးေနခဲ့ျပန္ပါတယ္။
ေဝဖန္မႈေတြ ခံေနရင္းနဲ႕ပဲ ရန္ကုန္မွာဆက္လက္ေနထိုင္ရင္း မၾကာခင္မွာေတာ့ သူမတို႔ေနထိုင္တဲ့ နယ္ကိုပဲ ျပန္ေတာ့မယ္ဆိုၿပီး ျပန္သြားၿပီးေနာက္ပိုင္းမွာေတာ့ အားလုံးကို လြမ္းေနတယ္ဆိုတဲ့အေၾကာင္းေတြကလည္း တင္လာခဲ့ၿပီးေနာက္ အလႉအတန္းဆို ရက္ေရာတတ္တဲ့ ျဖဴျဖဴေထြးတစ္ေယာက္ကေတာ့ သူမ တတ္နိုင္သေလာက္ လႉဒါန္းမႈေလးေတြေတာ့ အၿမဲျပဳလုပ္လ်က္ရွိပါတယ္။
ဒီေန႕ေလးမွာေတာ့ ျဖဴျဖဴေထြးက ” ဒီႏွစ္ သတင္းကြၽတ္ေလးကေတာ့ မိသားစုရွိရာေမြးရပ္ေျမေလး ဆီသို႔အျပန္ လမ္းကအမ်ိဳးမ်ားနဲ႕ေတြ႕ စဥ္က ဘာေလးလႉရလႉရ ” ဆိုၿပီး ဗီဒီယိုေလး တင္ေပးလာတာ ျဖစ္ပါတယ္ေနာ္..
သူမ တင္လာတဲ့ဗီဒီယိုေအာက္မွာေတာ့ အရင္လိုပဲ လႉတဲ့ေနရာမွာ ကင္မရာေတြကိုအိမ္မွာပဲ ထားခဲ့သူဆိုတဲ့သူနဲ႕ ေဝဖန္မႈေတြ ျမႇင့္တက္ေနခဲ့ပါတယ္ေနာ္… ပရိသတ္ႀကီးလည္း ျဖဴျဖဴေထြးရဲ႕အလႉေလးကို သာဓုေခၚေပးၾကပါအုံးေနာ္…
အားပေးမယ့်ပရိတ်သတ်တယောက်ထဲရှိလဲ ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ သရုပ်ဆောင်အောင်ရဲလင်း……
ကိုယ်ဝန်လွယ်ထားရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းရင်းနဲ့ ပက်သက်လို့ ရေးသားလာတဲ့ ထားထက်ထက်
နားထောင်သူပရ်ိတ်သတ်တွေ မျက်ရည်ဝဲသွားလောက်အောင် ရင်ဘတ်ချင်းထပ်တူကျစေမဲ့ သီချင်းလေးကို တင်ပေးလိုက်တဲ့ အဆိုတော် R ဇာနည်